ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံတွင် တည်ဆောက်နေသည့် ဂျပန်နည်းပညာအသုံးပြု အေရိုးဗစ်ဖို့မြေစီမံကိန်း လာမည?? - Yangon Media Group
ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံတွင် တည်ဆောက်နေသည့် ဂျပန်နည်းပညာအသုံးပြု အေရိုးဗစ်ဖို့မြေစီမံကိန်း လာမည??
ရန်ကုန်၊ဖေဖော်ဝါရီ၂၁-ထိန်ပင် အမှိုက်ပုံတွင် တည်ဆောက်နေ သည့်တစ်ရက်တန်ချိန်၁ဝဝ စုပုံ နိုင်သည့်ဖူကူအိုကာ ဂျပန်နည်း ပညာအသုံးပြု Semi Aerobic Landfill Project (အေရိုးဗစ်ဖို့ မြေစီမံကိန်း) မှာ၆ဝရာခိုင်နှုန်းပြီး စီးနေပြီဖြစ်ပြီး မတ်လလယ်တွင် ရာနှုန်းပြည့် ပြီးစီးမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံရှိမြေဧက၂ဒသမ၂ဧက(၁ဟတ်တာ)အ ကျယ်အဝန်းတွင် ယခုနှစ်ဇန်နဝါရီ ၂၈ရက်မှ စတင်တည်ဆောက် နေခြင်းဖြစ်ပြီး ဂျပန်နည်းပညာ ဖြင့် ရန်ကုန်စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီဘတ်ဂျက်ဖြင့် တည် ဆောက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်း ရန် ကုန်စည်ပင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်း သိမ်းရေးနှင့် သန့်ရှင်းရေးဌာနမှ ဒုတိယဌာနမှူးဒေါက်တာအောင် မြင့်မော်က ဖေဖော်ဝါရီ၂၁ရက်တွင် ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
” ဇန်နဝါရီ၂၈ရက်မှာ လက် တွေ့ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်တယ်။ ဒီနေ့ထိဆိုရင် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးကို ၆ဝရာခိုင် နှုန်းလောက်ပြီးနေပြီ။ တစ်ရက်ကိုတန်ချိန် တစ်ရာလက်ခံနိုင် မယ်။ သုံးရမယ့်နှစ်ကတော့ အနည်းဆုံးတစ်နှစ်ခွဲအများဆုံး နှစ်နှစ်သုံး လို့ရမယ်။ နှစ်ကျော်တဲ့အချိန်မှာ အမှိုက် အိဆင်းသွားမယ်ဆိုရင် ထပ်ပြီးတော့ထပ်ပုံလို့ရမယ် ဒါသူ့ နည်းပညာပေါ့။ တည်ဆောက်မှု ပြီးစီးမယ့်ကာလက သုံးလပိုင်း ၁၅ရက်လောက်ဆိုရင်ပြီးပါပြီ”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
ဖူကူအိုကာဂျပန်နည်းပညာ အသုံးပြုသော Semi Aerobic Landfill Project(အေရိုးဗစ်ဖို့ မြေစီမံကိန်း)၏လုပ်ဆောင်မည့် နည်းစဉ်မှာအမှိုက် မစုပုံရသေးသည့် မြေကြီးအလွတ်ပေါ်တွင် ကန်တူးကာ မြေများဖို့မည်ဖြစ်ပြီး ယင်းမြေများပေါ်၌ ပိုက်လုံးများ ခင်းခြင်း၊ ပိုက်လုံးအလယ်တွင်မိန်း လိုင်းတစ်လိုင်းထား၍ ဘေးတွင် ပိုက်လုံးများကို ငါးရိုးပုံစံများခင်း မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ထိုပိုက်လုံးများပေါ်တွင် ကျောက်များအုပ် ကာယင်းအပေါ်တွင် အမှိုက်များ ကိုစုပုံသည့်စနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက် မည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
အဆိုပါ နည်းပညာဖြင့် အမှိုက် စွန့်ပစ်ပါကစွန့်ပစ်အမှိုက်များမှထွက်လာမည့် မီသိန်းဓာတ် ငွေ့များ လေထဲထွက်သွားမည့် အတွက် မီးလောင်ကျွမ်းမှုမဖြစ်နိုင်တော့ကြောင်း၊ အမှိုက်မှထွက် လာမည့်အရည်များသည် မြေ ကြီးအောက်သို့ မစိမ့်တော့သည့် အတွက်မြေအောက်ရေညစ်ညမ်း မှုမှကာကွယ်နိုင်မည့် အားသာချက် များရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ပိုင်းလော့ပရော့ ဂျက် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်၂ဝ၁၇နှင့် ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်အတွင်း မိုးရွာလျှင်ရေ အမြင့်ဆုံးတက်သည့်ရေ Level ကို တိုင်းတာခဲ့ပြီးနောက် တည် ဆောက်ရေးဒီဇိုင်းကို ရေးဆွဲခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။
ယင်းအပြင် ထိန်ပင်အမှိုက် ပုံတွင်မီးလောင်မှု ထပ်မံမဖြစ်ပေါ် စေရန်ရေဂါလန်သန်း ၅ဝဆံ့ရေစု ကန်တူးဖော်ခြင်း၊ မီးသတ်ယာဉ် များအဆင်သင့်ထားရှိ ပြီးအမှိုက် ပုံများကို အပုံခွဲစနစ် (ပေ၂၅ဝ တိုင်း၌ လမ်းကြောင်းထိုးပြီးအ မှိုက်ပုံကြီးကို ခွဲထုတ်သည့် စနစ် ကိုပြုလုပ်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ထိန်ပင်အမှိုက်ပုံသည် ဧက ၂၉ဝ ကျယ်ဝန်းပြီး ဧက၂၂ဝတွင် အမှိုက်စုပုံကာ ဧက ၇ဝ ကျန် ကြောင်း ၂ဝ၁၈ ခုနှစ်ဧပြီ ၂၁ရက်၊ မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီခွဲကျော်ခန့်က ဧက ၁၅ဝ မီးလောင်ခဲ့ကာ အချိန် တစ်လကြာ မီးငြှိမ်းသတ်ခဲ့ရသည်။
ရေးမြို့နယ် စည်ပင်သာယာမှ ဘီးကောက်ကောက်ခံရာတွင် ရိုင်းပျစွာကိုယ်ထိလက်ရောက်ကျူးလွန်ခြင်းန
မြန်မာ့ ကျောက်မျက် ရတနာပြပွဲ နေပြည်တော်၌ ကျင်းပ၊ ပြည်ပရတနာ ကုန်သည် သုံးထောင်ကျော် စာရင်းပေ?
ရိုက်တာ သတင်းထောက်နှစ်ဦး အမှုကို သြဂုတ် ၂၇ ရက်တွင် အပြီးသတ် အမိန့်ချမည်